kuhanjiswa izinto zokufudumeza
ngu admin ku 20-05-25
Ukulethwa okusha eHouston USA
ngu admin ku 20-05-18
Lokhu ukulethwa okusha esikuthumele namuhla, abakhiqizi abanentshisekelo ngathi bangaxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi.
I-MIG WIRE, UKUKHULULWA OKUSHA EKHAYA, QHAZA!
I-Hucheng Welding, Xhuma Wena Nami, Umhlaba onemibala enhle! Siyakwamukela ngemfudumalo ukuthi usithinte!
Ukulethwa eNdiya, i-flux ye-arc welding wire
12Okulandelayo> >> Ikhasi 1/2
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Okufakiwe Products - Ibalazwe - Hambayo Site
Flux Cored Wire Element , Flux Cored Arc zokushisela Wire , Welding Consumables ,